हेटौंडामा कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट नआउदै सामाजिक विकास मन्त्रालयले भन्यो " सबैको नेगेटिभ आयो"
जेठ २२, २०७७ ०५:४२:५२
जेठ ६, २०७७ बागमती खबर
विश्वभर माहामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को परिक्षण,नियन्त्रण र यसले निम्त्याउने जोखिमप्रति बागमती प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालय संबेदनशील नभएको पुष्टि भएको छ।
केहि समय अघि पर्साबाट आएको स्वाब हेटौंडामा परिक्षण गर्दा शंकास्पद रिपोर्ट निस्किदा मन्त्रालयले नेगेटिभ आएको तथ्यांक निकालेको थियो। भोलिपल्ट उक्त स्वाबको रिपोर्ट काठमाण्डौबाट पोजेटिभ आयो।
त्यस्तै फेरी पनि मन्त्रालयले गम्भीर त्रुटी गरेको छ। अति संबेदनशील कुरामा मन्त्रालयले हेल्चेक्र्याई गरेको पाइएको छ।
आइतबार बिहान हेटौंडा ४ स्थित आइसोलेसन वार्ड छेउमा राखिएको स्वाब संकलन बुथबाट ४१ जनाको स्वाब निकालियो। पिसिआर परिक्षण लागि हेटौंडाको टिक जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भएको कोभिड १९ प्रयोगशालामा ४१ वटा नमुना पठाईयो। प्रयोगशालाले ३ बजेसम्ममा रिपोर्ट आइसक्ने जानकारी दियो। तर आइतबार अबेर सम्म रिपोर्ट नआएपछि बिद्युत आपूर्तिमा समस्या भएकाले रिपोर्ट नआएको र सोमबार बिहान सम्ममा आउने जानकारी आयो ।
सोमबार बिहान पनि रिपोर्ट आएन, दिउसो २ बजेसम्म रिपोर्ट नआएपछि किन आएन भनि प्रश्न उठ्न थाले। साझ प्रयोगशाला स्रोतले बतायो हामि आजपनि रिपोर्ट दिन सक्दैनौ ।
आइसोलेसनमा बसेका झन् त्रसित हुन थाले, शंका गर्ने बढ्न थाले । प्रयोगशाला स्रोतले केहीको स्वाब परिक्षण गर्दा शंकास्पद देखिएको र हामीले अहिले यहि भनेर रिपोर्ट दिन मिल्दैन भन्दै मुख खोल्यो ।
राति पौने १० बजे सामाजिक बिकास मन्त्रालयले दैनिक रिपोर्ट तयार पार्यो । जसमा हेटौंडाको प्रयोगशालामा हेटौंडाबाट ४१, रौतहटबाट ११ र सिन्धुलीबाट ४ गरि ५६ वटा स्वाब आएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उल्लेख गर्यो।
यता प्रयोगशाला स्रोतले भने रिपोर्ट ट्यालि नै भएको छैन, हामीले रिपोर्ट यो आयो भनेर दिन सक्ने अवस्था नै छैन भन्दै दावी गरिरह्यो। तर उता मन्त्रालयले भने रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भनि निकालिसक्यो ।
पटक पटक परिक्षण गर्दापनि यकिन रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्था नभएपछि स्वाब काठमाण्डौ पठाउने कि अन्तिमपटक यहि नया केमिकल प्रयोग गरि पुनः परिक्षण गर्ने ? भन्नेमा दोधार भयो । यद्दपी मंगलबार बिहानै प्रयोगशालाले स्वाब पुनः परिक्षणका लागि ४७ वटा स्वाबको नमुना भरतपुर् स्थित कोभिड १९ प्रयोगशाला पठायो ।
यहाँबाट प्रस्ट देखिन्छ कि सामाजिक विकास मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भनि सार्वजनिक गर्यो ।
यदि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आएको भए आज ४७ जनाको स्वाब पुनः परिक्षणका लागि किन पठाइयो ? सामान्य अर्थमा यहिबाट बुझिन्छ।
शंकास्पद रिपोर्ट निस्किएपछि पटकपटक परिक्षण गर्दासमेत आइतबार बिहान लिएको स्वाबको रिपोर्ट सोमबार रातिसम्म पनि प्रयोगशालाले निकाल्न सकेन। उता मन्त्रालयले हचुवाको भरमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको भनि सार्वजनिक गर्यो।
यसले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको प्रयोगशालामाथिको विश्वसनीयता र सामाजिक बिकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठेको छ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, जेठ ६, २०७७, १२:०५:००
मकवानपुर प्रशासनको निर्णयले हावा खायो, नाकामा छैन कडाई , बजारमा थेगीनसक्नुको भिड जेठ २२, २०७७ 630